🥇 ▷ Qeybta 7: duufaanka shucaaca. Maalintii ugu dambeysay Dhulka ✅
Qeybta 7: duufaanka shucaaca. Maalintii ugu dambeysay Dhulka
Xubnaha qaaliga ah ee qabaa’ilka, cusboonaysiintaan adigaa iska leh. Waa waqtigii la isugu imaan lahaa dhammaan walaalihiina oo waji kale la kulmi lahaa Sector 7 – Dabayl Shucaac. Laakiin waxyaalaha hore marka hore. Meel cusub oo la yiraahdo Outpost ayaa laga helay gadaasha darbiga. Waxay yiraahdeen saynisyahannadu waxay ka soo uruuriyeen ilo muhiim ah halkaas ilaa qaladaadka ay ka sameeyeen sameynta tijaabooyin ay Sector 7 ka sameeyeen aag aan macquul aheyn oo lagu noolaado.
Dhulka dibedda ka ah waxaad ka heli doontaa noocyo ka mid ah noocyada shaqooyinka: alwaax shaqada, foornada dhalaalaysa, jaranjarooyinka reeb, miisaska dabka lagu tuuro, miiska dhagaxa laga goosto, miisaska nijaarka, miisaska tolidda iyo laabta. Markaad soo gasho Websaydhka, xulafooyinkaaga oo waxaad soo celin kartaa baloogyada shaqada iyo xabadka meesha. Sida caadiga ah, xabadka ayaa loo heli doonaa qof walba, halka isbedelada marinnada marin-u-helka la siin doono oo keliya hoggaamiye qabiil.
Workbenches ayaa loo baahan doonaa si loo farsameeyo ilaha aan la adeegsan ee lagama maarmaanka u ah dhammaystirka hawlgallada qaarkood. Sida saxda ah, hadda waxaad ka soo qaadan kartaa agabyada meelaha ‘Sector 7’! Ujeeddadan awgeed, dallac, faas iyo shandad ayaa lagu daray si ay u qaadaan qoryo iyo dhagaxyo dheeraad ah. Saddexdii maalmoodba mar, meesha waxaa gebi ahaanba baabi’in doona duufaano shucaac ah. Inta lagu guda jiro duufaanka, waa inaad ka saartaa dhamaan waxyaabahaaga qiimaha badan si aadan u lumin ilo aad ku kasbatay.
Si loo kordhiyo fursadaha badbaadada ee darbiga ka dib, waxaa jira hub fiican oo dagaal ka agdhow: Crowbar, Cleaver, Spear, Baseball Bat iyo guntin dheeri ah oo jeebka loogu talagalay kuwa furan.
La wadaag oo dhibcahaaga i sii!